Anyi kwesiri idochi okwu a bu "Geomatics"? - Geofumadas
Anyị kwesiri dochie okwu a "Geomatics"?
Disemba, 2017 Geospatial - GIS
N'iburu n'uche nsonaazụ nke nyocha emere n'oge na-adịbeghị anya, nke Board of the Group of Geomatics Professionals (GPGB) nke RICS, Brian Coutts na-agbaso mgbanwe nke okwu ahụ "Geomatics" ma na-arụ ụka na oge eruola ịtụle gbanwee
Okwu a eweghachiwo isi ya "jọrọ njọ". Kọmiti nke Group of Geomatics Professionals (GPGB) nke RICS, dị ka anyị kwuru, na nso nso a mere nnyocha banyere iji okwu ahụ bụ "Geomatics" iji kọwaa ihe mbụ, na njikọ ya, Topography and Divine Hydrography Division (LHSD) . Gordon Johnston, Onye isi oche nke ụlọ ọrụ ahụ a kpọtụrụ aha na mbụ, kwuru na nso nso a na "enwetara azịza ezughị iji gaa n'ihu n'okwu a." Ya mere, o yiri ka, ọ dịkarịa ala maka ụfọdụ, a ka nwere ụdị antipathy dị ka okwu ahụ na enwere ike ịtụle mgbanwe. Geomatics abụrụla okwu arụmụka kemgbe iwebata ya na 1998, ọ ka nọkwa otu a.
Jon Maynard kọrọ na, na 1998, naanị 13% nke Ala na Hydrography Division kwadoro mkpebi nke ịgbanwe aha ka ọ bụrụ ikike nke Geomatics, na, nke 13%, 113 kwadoro atụmatụ ahụ na 93 na-emegide . Ọ bụrụ na anyị wepụta nọmba ndị ahụ ọ ga - eso na nke ahụ n'oge ahụ, enwere ihe dị ka ndị otu 1585 na LHSD. Onu ogugu enyere nyere ndi 7,1% nke ndi otu nwere amara na 5,9% megide, ya bu, oke nke 1,2% nke ndi otu! O doro anya na ọ bụghị ihe a ga-akpọ ntuli aka doro anya, ma ọ bụ ikike maka mgbanwe, ọkachasị mgbe enwere ya na 87% kwupụtara enweghị echiche.
Ebee ka okwu a si di na Geomatics si?
A na-echekarị na okwu ahụ si na Canada wee gbasaa ngwa ngwa na Australia nakwa na United Kingdom. Arụmụka ahụ nke rụpụtara, na Great Britain, maka mgbanwe a tụrụ atụ aha agụmakwụkwọ topography ma na mahadum na ngalaba RICS iji tinye okwu ọhụrụ, ghọrọ arụmụka n'oge ahụ, na Ọ na-eme ka ọgụgụ akwụkwọ na akụkọ ihe mere mgbe ahụ ụwa topography na-atọ ụtọ. Oku Stephen Booth maka "... nkwalite karịa karịa Geomatics pụtara ..." yiri ka elebaraghị ya anya na 2011.
Ọ bụ ezie na enwere ihe akaebe na-egosi na e jiri okwu ahụ Geomatics mee ihe dị ka 1960, a na-anabatakarị na okwu ahụ (geomatique na French mbụ nke geomatics bụ ntụgharị Bekee) bu nke mbụ na akwụkwọ sayensị na 1975 site Bernard Dubuisson, onye France geodesta na onye na - ese foto (Gagnon na Coleman, 1990). Edeela ya na Kọmitii International nke asụsụ French nabatara okwu ahụ na 1977 dị ka akwụkwọ neologism. Ya mere, ọ bụghị naanị na 1975, mana o nwekwara ihe ọ pụtara! Ọ bụ ezie na Dubuisson akọwapụtaghị ya nke ọma, akọwapụtara nkọwa ya n'akwụkwọ ya dịka ọ gbasara ọnọdụ mpaghara na kọmputa.
N’oge ahụ okwu nnwereghị nkwenye a tụrụ anya ya. Ọ bụ mgbe Michel Paradis, onye nyocha si Quebec, were okwu ahụ, nke malitere iji ọtụtụ ndị ọzọ. Mahadum Laval were akwụkwọ ahụ iji agụmakwụkwọ dị na 1986 na ntinye nke mmemme mmụta na Geomatics (Gagnon na Coleman, 1990). O si Quebec gbasaa na Mahadum New Brunswick, ma gbasaa Canada niile. Naturedị asụsụ abụọ nke Canada nwere ike ịbụ ihe dị mkpa maka ịnakwere na ịgbatị na mba ahụ.
Gịnị kpatara mgbanwe?
Ya mere, o bu ihe nwute na ndi otu ndi okenye toro torographic, mgbe eweputara okwu a bu "Geomatics" na Britain, gbara uka na enwere ike inabata ya ma kọwaa ya ka ndi hotara ya wee dabaa na mkpa nke ha. Ihe kpatara e jiri choo mgbanwe mgbanwe bu, na mbu, imeziwanye ihe onyonyo a site na ime ka odi ka ihe ohuru ugbua, nke nwere ahia uku na ichota teknụzụ ohuru na mmepe. Nke abuo (na ikekwe, n’ezie, ihe kacha mkpa) iji mee ka mma ọrụ ahụ dị n’etiti ndị na-aga ime ihe omume maka usoro nyocha nke mahadum.
Gịnị kpatara ịgbanwe ọzọ?
N'icheghachi echiche, ọ ga-adị ka ọ bụ amụma nwere atụmanya. Mmemme mmụta nyocha nke mahadum ejirila ụlọ akwụkwọ injinia nweta ya. Studentsmụ akwụkwọ ahụ, na-ekwu maka ọnụọgụgụ, nọgidere na-agbada, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala, na-ahụ otu ihe ahụ, ndị ọrụ n'ozuzu ha anabatabeghị okwu ahụ iji tinye ya na isiokwu nke omume ahụ, ọ nweghịkwa ka a ga-akpọ ya "geomatics." Ọ dịghịkwa apụta na ọha na eze maara ihe Geomatics pụtara. Ojiji a na-eji okwu geomatik dochie okwu topografi, ọkachasị gbasara ala, na o yiri ka ọ kụọla afọ niile. Na mgbakwunye, ihe akaebe na-egosi na RGB GPGB ekwenyeghi na geomatik bụ okwu ịchọrọ ịga n’ihu iji aha gị.
Nyocha ahụ onye edemede dere na 2014, na eziokwu ahụ bụ na GPGB lere anya na o kwesịrị ekwesị iji bulie okwu ahụ, na-egosi na enwere opekata mpe ma ọlị na iji okwu ahụ geomatic dịka onye na-agbago maka… ihe. Ọ bụghị maka ọrụ a, n'ezie, ebe ọ ka yiri ka a na-anabatakarị ya dị ka "topography" ma ọ bụ "topography nke ala." Nke a abụghị naanị eziokwu na United Kingdom, mana ọ bụkwa eziokwu na Australia na ọbụlagodi Canada, ebe mkpụrụokwu malitere. N'Australia, okwu geomatik adabalarị na ọ were were were nke "sayensị mbara" dochie anya ya, nke ya onwe ya na-efunari ihe ọhụụ na nso nso a na-aga n'ihu dịka "sayensị geospatial."
N'ọtụtụ mpaghara Canada, okwu geomatic nwere njikọ na injinia, nke na-egosi na topography nwere ike ịbụ ngalaba ọzọ nke ọzụzụ ahụ. Nke a bụ eziokwu na Mahadum New Brunswick, ebe “Geomatics Engineering” guzo n'akụkụ ngalaba injinia ndị ọzọ, dị ka obodo na igwe.
Kedu ihe ga - edochi okwu geomatic?
Yabụ, ọ bụrụ na okwu geomatic emee ka ndị na-akwado ya ghara inwe obi ụtọ, olee okwu nwere ike dochie ya? Otu n’ime ihe jikọrọ n’onye anabataghị ya bụ ọnwụ nke akwụkwọ ntụpọ ahụ. Ọ bụrụ na mmadụ nwere ike injinia geomatiki, mmadụ enwere ike ịnweta nyocha nke geomatic? Eleghị anya ọ ga-eme, aga m anwa ịtụ aro. Nke ahụ nwere ike ibute ọbụna ọgba aghara karị.
N’ihota mkpa na-abawanye na ikike ịkọwapụta ọnọdụ ma ọ bụ ọnọdụ nke ihe niile, n’ụzọ zuru oke ma n’ụdị ya, a na-eburu okwu ahụ “oghere” ozugbo. Nke ahụ bụ, ọkwá ma ọ bụ ọnọdụ dị na mbara igwe. Y’oburu na onodu a di oghere, dika ihe ozo di na mbara uwa a, o na - eso uzo uwa a buru ihe ndi mmadu putara. Ebe ọ bụ na ihe ọmụma banyere otu ihe dị na ọnọdụ ahụ bụ ihe bụ isi nke ịbụ onye na-enyocha ala, ikike ịba ụba nke ọtụtụ ngwa nwere ezigbo ihe dị iche iche iji nye data ọnọdụ, yana mmepe na-aga n'ihu na ngwa nke Enwere ike itinye ihe ọmụma dị otú a, ọrụ ahụ toro na mkpa - ọrụ ọ bụ ya bụ nke ndị nyocha nke Geospatial.
Ọ bụ ezie na "akwụkwọ akụkọ ala" nwere akụkọ ntolite dị ukwuu ma dị mpako, ma eleghị anya ntụnyere ala nwere uru na ọdịmma ya. Utọ onye nlebara anya nke ugbua nyere ya ohere itinye ma ngwaọrụ ya, ihe omuma ya na nghota nke izi ezi ya, ya na izu oke nke nha site na uzo di iche-iche rue uzo ozo ka o ju ase. ebe a na - eme ihe nkiri. Ugbu a ọ dị mkpa ịmara ma nọgide na-enwe mkpakọrịta na ọrụ ọdịnala ahụ. Mgbe achọrọ onye nrụpụta ntozu ịmata ihe dị iche na onye nyocha ala mbụ na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ na-eji topography na aha ha, ndị na-enyocha geospatial bụ okwu ahụ na-egbo mkpa ahụ.
Booth, Stephen (2011). Anyị achọtara njikọ ahụ furu efu mana anyị agwaghị onye ọ bụla! World Geomatics, 19, 5
Dubuisson, Bernard. (1975). Omume sitere na Photogrammetrie et des Moyens Cartographiques nweta des Ordinateurs. (KJ Dennison, Trans.). Paris: Mbipụta Eyrolles.
Johnston, Gordon. (2016). Aha, iwu na ike. World Geomatics, 25, 1.
Gagnon, Pierre & Coleman, David J. (1990). Geomatics: uzo di nkpa na nhazi iji zute ihe omuma gbasara oghere. Canadianlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nyocha na Nyocha nke Canada, 44 (4), 6.
Maynard, Jon. (1998). Geomatics - etinyela votu gị n’ime akaụntụ. Vewa nyocha, 6, 1.
E bipụtara ụdị mbụ nke edemede a na Geomatics World November / December 2017
Previous Post«Previous Ahụmahụ m na-eji Google Earth maka Cadastre
Next Post Chọta map ma dezie ụzọ iji BBBikeNext »
Otu azịza na "Ọ kwesịrị ka anyị dochie okwu ahụ bụ 'Geomatics'?"
Jorge Viloria kwuru, sị:
Edemede mara mma, anyị nwere ike iru nkwubi okwu banyere mmetụta teknụzụ ọhụụ na-akpata na usoro na ọzụzụ dị ka mmepeanya n'onwe ya: Geography, topography and thegraphy.
Ihe dị mkpa banyere nke a bụ ịgba mbọ hụ na okwu ndị anakwere dị ka eziokwu na-adịgide karịa oge na ha na-egosipụtakarị atụmatụ nke azụmaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ kọwara.
Maka m, geomatics, ọ bụbu icing mara mma nke na-achọ mma achicha, mana n'ikpeazụ, enwere okwu na-abịa ma na-aga dị ka ejiji ma ghara ịdịte aka. Ana m agbatịkwu aka banyere sayensị geospatial ma ọ bụ naanị geoscience.